I-Pin-point Banner
Phina Isibhengezo Sephuzu
Khomba i-flag, ezaziwa nangokuthi isibhengezo seBubble, ziyizibhengezo ezinkulu eziphathwayo ezinomumo okhethekile onjengomaka wendawo kumamephu, asetshenziselwa kakhulu imicimbi, izindawo zokudayisa, umsebenzi wokuphromotha, nanoma yikuphi lapho udinga khona ukuze udonse ukunaka kwamakhasimende angaba khona.
Kuyisixazululo esifanele sezivimbela zethrafikhi eziseceleni komgwaqo, uxhaso nezibonisi zokukhangisa kokubili ngaphakathi nangaphandle!Maka indawo yakho futhi uqashelwe ngesibhengezo esiphrintiwe ngokwezifiso.
Izicelo:Imicimbi yezemidlalo, imicimbi yokuphromotha, imikhosi, amakilabhu, izitolo ezinkulu, izinkomfa, imibukiso yemigwaqo nemibukiso yezohwebo.
Izingxenyekazi zekhompiyutha zamafulegi e-Pinpoint zihlanganisa izigxobo zekhabhoni eziyinhlanganisela, isixhumi sensimbi somumo ongu-Y kanye nesikhwama sokuthwala i-oxford.Isigxobo esiyinhlanganisela yekhabhoni sivumelana nezimo futhi siqinile ukuqinisekisa ukuthi umumo uzinzile futhi akulula ukuhlephuka.
Isixhumi somumo ongu-Y singafakwa kunoma yisiphiyima isisekelowethu.Isibhengezo sokukhomba sizozungeza ekuthwaleni i-spigot futhi sidale ukubuka okungu-360° emoyeni.
Isikhwama se-Oxford siqinile futhi silungele imicimbi eyahlukene.
Isibhengezo Sephuzu Lephinikhodi sinendawo enkulu yesithombe yohlangothi olulodwa noma ukuphrinta kwezinhlangothi ezimbili.
Itholakala ngosayizi abathathu futhi ubukhulu obukhulu bungu-2m, ingahlangabezana nezidingo zokubonisa zamakhasimende ahlukene.
(1) Isigxobo sefayibha esiyinhlanganisela yekhabhoni eqinisiwe sivumela isibhengezo ukuthi sinqobe umoya.
(2)Woza nesixhumi sensimbi esimise okuka-Y ukuze uxhumane nanoma yiziphi izisekelo zohlelo lokusebenza oluhlukile.
(3)Indawo enkulu enemifanekiso efundeka njalo umlayezo
(4)Jikeza emoyeni ukuze udonse ukunaka okwengeziwe
(5)Isethi ngayinye iza nesikhwama sokuthwala, esiphathekayo futhi esingasindi
DB12 S 1.2m*0.8m 1m
DB15 M 1.52m*0.95m 1m
DB21 L 2.15m*1.07m 1.3m
Okwedlule: P banner
Olandelayo: Isibhengezo sika-R